Ukubikezela ezingeni lelisetulu umkhiqizo kunzima kakhulu, Nokho, ukudala izimo ezifanele kakhulu lokhu ezandleni ochwepheshe. Quality inhlabathi evundile - kube nenxenye isihluthulelo sempumelelo isivuno high. Bonke labo ziyazi ukuthi ngempumelelo kwesizini sokuhlwanyela, kubeka isisekelo eziyisisekelo ukukhula obengeziwe isivuno, bafinyelela esiphethweni ngesidingo bayothenga okusanhlamvu seeder Dzhon Dir.
Imininingwane sokuprakthiza okusanhlamvu Dzhon Dir kusho ukuhlwanyelwa nje kuphela, kodwa futhi ngokukhethekile ukuphathwa inhlabathi. Sokuzivivinya Site ukusetshenziswa njengoba ezindaweni ezinkulu futhi ezincane, banikezwe khona impumuzo umhlaba engalingani.
Izinhlobonhlobo seeding imishini yokukhiqiza Dzhon Dir:
ububanzi amathathu ukusebenza ukucushwa bamba - 3.0, 4.6, 6.1;
ithuba ukuze uqedele ezimbili izinhlobo imigqomo: elula kuhlangene, okuyinto yena, kusikisela ukuba khona linezingxenye eziningana ukuhlwanyelwa kanyekanye futhi seedbed;
Cabin imishini volumetric sokuphuzisa lawula ukusekela ngokulondoloza uhlelo ikuvumela ukuba ulungise izinga seeding;
Isisetshenziswa uhlelo ukusonga enikeze zokuthutha ukhululekile kakhulu okusanhlamvu zikhathi zokuzivivinya.
"Yini poseesh- kusondela!" - isihloko izinga.
Hlanganisa kwabavuni John Deere waziwa emhlabeni wonke njengoba enamandla kakhulu futhi ukusebenza okuphezulu zihlukaniswa uchungechunge ezintathu:
Uchungechunge W - uchungechunge elula kakhulu, kodwa akukho ezingatheli of imishini yokuvuna, ifakwe eziyisithupha-cylinder ezinamandla nge turbocharger, ukhululekile gumbi ukusebenza ezingeni lelisetulu ukubonakala, kanye ezahlukeneyo ezine unhlokweni (izitshalo ensimini, ukuvuna ahlukene ezindaweni ezimanzi, ukolweni, ibhali kanye oats);
T Series - uhlelo enamandla kakhulu sokuvuna walker ifakwe uhlelo utshani walker nge asebenzayo ngokwahlukana endaweni enkulu, ukhululekile kakhulu gumbi Premium uchungechunge nethuthukisiwe selitulu izixazululo Inthanethi;
uchungechunge S - kakhulu uhlelo elikhiqizayo futhi enamandla nokuba Rotor design obungcono engela variable, ifakwe endlwaneni ergonomic ezingeni anda wenduduzo, ukugaya sicabangela izindlela eziningana futhi bahlakaze impahla isukela kuze ku-12 metres.
Dzhon Dir Inkampani ukhiqiza ephezulu ezahlukene imikhiqizo yezolimo, ukufuneka ethandwa kakhulu futhi. Thenga izingxenye elingasebenzi ngoba seeders, ihlanganisa kunoma yiliphi izwe emhlabeni wonke, ngenxa ububanzi nomthengisi inethiwekhi John Deere.
isivuno esihle lisikisela ezinezithelo phambi belungiselela iqoqo yakhe. tillage, zokutshala, tillage imisebenzi - konke lokhu landulelwa unhlokweni Imininingwane. Zonke lezi zinyathelo kukhona siphoqe imishini esebenza kahle yesimanje yezolimo, ezifana - ngamakhuba, amahhala, zokutshala izinhlelo, sprayers, ihlanganisa, ogandaganda nokuningi.
Ukwencika eliphezulu emnothweni wamazwe amaningi komkhakha wakuleli wezolimo, okwaholela ukuvela ezihlukahlukene kakhulu abakhiqizi, onguchwepheshe imishini wezolimo daba. Omunye ethandwa kakhulu emhlabeni wonke, inkampani John Deere, ababebalelwa sineminyaka eyikhulu ukhona, umise ngokwaso njengoba nje inkampani ye ephezulu ubuchwepheshe.
imphawu letibalulekile tractor yenkampani John Deere:
eliphakeme injini wokukhipha 600 hp;
yizinhlobonhlobo wokuhlanganisa ne ezikhethekile imishini yezolimo ;
18, front futhi bakhulise 6 velocities;
friendly LCD isibonisi kusiza ekuphathweni inqwaba imisebenzi;
cab ukhululekile navigation lula futhi lawula ukusekela ngokulondoloza uhlelo ifakwe touch panel imisebenzi.
Khetha brand best seeding imishini
Ukutshala ngokulima nokuhlwanyela imishini, okubandakanya ukuhlwanyelwa okusanhlamvu, ukucacisa zokutshala, imishini tillage sokuhlwanyela, amageja futhi asebenzise imishini ethize unesibopho izinga isivuno, futhi ngenxa yalokho kumelwe sivumelane nazo zonke izimfuneko ezidingekayo namazinga. Abaholi bezwe, besendaweni ephakeme kakhulu kule simo zokukhiqiza, kukhona seeders abakhiqizi John Deere, Amazone, Vaderstat.
Yini Excavator umkhiqizo ngehora futhi shift ngalinye? Ukubala of ukuphumelela kokusebenza kwe-Excavator